R/W CCC oo shaaca ka qaaday sababta uu u magacabay FAARAX iyo Guuleed |
R/W CCC oo shaaca ka qaaday sababta uu u magacabay FAARAX iyo Guuleed
Ra’iisal Wasaaraha Xukuumadda Federalka Somaliya Dr. Cumar C/rashiid Cali Sharmaarke, ayaa wuxuu ka hadlay arrinta buuqa iyo hadalhaynta badan dhalisay, ee la xiriirta waxa keenay in Faarax Sheekh C/qaadir Maxamed iyo C/kariin Xuseen Guuleed dib loogu soo daro Golaha Wasiriada Somaliya.
Ra’iisal Wasaaraha, ayaa ku waramaaya in haddii Wasiiro cusub la keeni lahaa uu waqti badan ku bixi lahaa, sidii ay ula qabsan lahaayeen shaqada cusub, sidaasi daraadeedna loo baahday in la keeno kuwii hore, si loo dardargeliyo hawlaha Dowladda, iyadoo waqtiga uu aad u yar yahay awadeed.
“Meeshaan laba qorshe ayaa banaanaa, qorshe ahaa in dadkii Wasiirada soo noqday kuligood laga taggo, oo dad cusub la wada keeno. Taas khatarta aan u aragnay waxay ahayd haddii hadda dad cusub la keeno hawshii socotay oo dhan waxay noqoneysaa, hadda iyo kow waxay noqoneysaa dad aan aqoon inay bilaabaan. Waxayna keeni kartaa in lix bilood nagu qaadato sidii uu ula qabsan lahaa, waqtiga harayna uu aad u yar yahay. “ ayuu yiri Ra’iisal Wasaaraha Somaliya.
Isagoo ka hadlaayay Xildhibaanada saluugsan in la soo celiyo Wasiiradaasi, waxa uu yiri “Hadda waxa dhacay waa xiisad siyaasadeed oo dhiig kuma daadan, laakiin waxaan rajeyneynaa xiisadaan siyaasadeed inay degto. Dalkaana wuu isku filan yahay in laga wada shaqeeyo weeye.”
Sidoo kale wuxuu yiri “Waxaa weeye inaan ka shaqeyno in anaga aan shakhsiyadeeno siyaasadda aan ku jirno iyo in waxaan wixii looga gudbi karo, oo siyaasad ah oo dalkaan 2016-ka doorasho lagu gaarsiin karo sameyno. Marka waxaan ka cararay shakhsiyadeenta siyaasadeed.”
Bulshadu waxay saluugsan tahay in la soo celiyo Wasiiradii hore qaarkood, haddiiba si guud loogu wada dhaliilay inay ku fashilmayn shaqooyinkii ay horey u soo qabteen.